कोरोना संकटले गोजी रित्तिएपछि अपराध र आत्महत्याको बाटोतिर
भदौ २६ गते शुक्रवार भक्तपुरको थिमि नगरपालिका–६ निकोसेरामा एकै परिवारका ३ जना मृत फेला परे ।
घरको छुट्टाछुट्टै तलामा ३६ वर्षीय सुदीप अधिकारी, उनकी पत्नी ३४ वर्षीया सम्झना अधिकारी र १५ वर्षीय सुशान्त अधिकारीको शव फेला परेको थियो ।
तल्लो तलाको आ–आफ्नो कोठाको सुत्ने खाटामा सम्झना र सुशान्तको शव कुहिएको अवस्थामा फेला परेको थियो भने सुदीप माथिल्लो तलमा वान्ता गरेको अवस्थामा फेला परे ।
घटनास्थलमा रगत र अन्य केही तरल पदार्थ सुकेको अवस्थामा भेटिएको छ । सानो बेलायती कुकुर पनि मरेको अवस्था देखिएकाले सुदीपले पत्नी र छोराको हत्या गरेर आत्महत्या गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
घरका सामानहरू यथास्थितिमा रहनु र अन्य कुनै पनि व्यक्तिको संलग्नता नदेखिएकाले सुदीपले पत्नी र छोराको हत्या गरी आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दीपक थापाका अनुसार सुदीपले कृषि विकास बैंकबाट २३ लाख ८५ हजार र सम्झनाको माइती अर्थात् ससुरालीबाट २ लाख ऋण दिएको देखिएको छ । त्यसमध्ये कृषि विकास बैंकको १८ लाख र ससुरालीको २ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।
घरको सटरमा पसल गर्दै आएका सुदीपको पसलमा खासै सामानहरू नरहेको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले जनाएका छन् ।
भदौ २८ गते आइतवार काठमाडौंको कीर्तिपुरमा घरधनीले डेरावालको हत्या गरेको घटना सार्वजनिक भयो । भारतको चम्पारण घर भएका ४२ वर्षीय शम्भु चौधरी (महतो) काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–७ भाजंगलका प्रेमकृष्ण महर्जनको कुटाइबाट मारिए ।
ज्याला मजदुरी गर्दै आएका शम्भुले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीको समयमा कोठा भाडा दिन ढिलो गरेको भन्दै कुटपिट हुँदा मृत्यु भयो । कहिले खलासी त कहिले ठेलामा व्यापार गरेर परिवार पाल्दै आएका शम्भुले लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा भाडा तिर्न केही ढिलो भएको थियो । उनले १२ हजार रुपैयाँ दिएपछि घरधनीले डेरा सर्न दबाब दिइरहे ।
पछिल्लो २ महिनाको भाडा तिर्न बाँकी थियो । घरधनीले डेरा सर्न दबाब दिएपछि अर्को ठाउँका कोठा खोजेर आधा सामान सारेका थिए, आधा सार्न बाँकी नै थियो । त्यही विषयमा विवाद हुँदा घरधनी महर्जनले टाउको र पेटमा हानेर हत्या गरे ।
काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका–१२ देशभूमिका २३ वर्षीय राजकुमार दनुवारलाई अपहरण गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले ३ जनालाई सार्वजनिक गर्‍यो ।
अपहरण गरेर ५० हजार फिरौती माग गरेको अभियोगमा प्रहरीले प्रहरीले सोही वडाकै तीघरेका आकाश परियार, नेमाल गाउँपालिका–७ माइती भएकी सविना तामाङ र रोशी गाउँपालिका–१२ माइती भएकी उमा परियारलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रवि पौडेलले बताए ।
अपहरण र फिरौतीमा संलग्न आकाश र सविना पतिपत्नी हुन् । आर्थिक हैसियत मजबुत भएका व्यक्तिलाई पहिचान गरी लकडाउनको समयमा सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत कुराकानी गर्ने र जंगलमा भेट्न बोलाएर आकाशले पत्नी पठाउने र आफू गएर पैसा बार्गेनिङ गर्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको एसपी पौडेलले बताए ।
यी केही प्रतिनिधि घटना हेर्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको संकटका कारण अपराध र आत्महत्याका घटना भइरहेका देखिन्छन् । पहिलो घटनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि बैंकको ऋण तिर्न नसकेर परिवारको हत्या गरेर आफैंले पनि आत्महत्याको बाटो रोजेको प्रहरी निष्कर्ष छ ।
दोस्रो घटनामा रोजगारी गुमाएपछि घरधनीले दिने मानसिक दबाब र शारीरिक यातनाले गर्दा ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने तेस्रो घटनामा आर्थिक अभावले अपहरण र फिरौतीसम्म पुग्नुपरेको अवस्था देखिएको छ ।
कोरोना भाइरस महामारीपछि अपराधको प्रवृत्ति र आत्महत्याको अवस्थालाई हेर्दा आर्थिकसँग जोडिएका घटना देखिएका नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) कुवेर कठायतले बताए । ‘पछिल्लो समयमा भएका अपराधका घटना र आत्महत्यालाई हेर्दा मुख्य रूपमा आर्थिक पाटो नै जोडिएको देखिएको छ,’ प्रवक्ता कठायतले लोकान्तरसँग भने ।
आर्थिक समस्याले गर्दा मानसिक रोग बढ्यो : डा. ओझा
कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि मानिसहरू मानसिक रोगको शिकार भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) का मानसिक रोग विभाग प्रमुख तथा मानसिक रोग विषेशज्ञ डा. सरोज ओझाले बताए । ‘लकडाउनको समयमा मानिसहरूको आर्थिक अवस्था खस्किएको छ । यसले गर्दा उनीहरू डिप्रेसनमा गएको देखिन्छ,’ विशेषज्ञ डा. ओझाले लोकान्तरसँग भने, ‘सामाजिक र पारिवारिक समस्याले पनि मानिसहरूमा डिप्रेसन बढेको देखिन्छ ।’
बन्दाबन्दीको समयमा आम्दानीको बाटो बन्द भएर कसरी घरपरिवार चलाउने भन्ने कुरा धेरै सोच्न थालेपछि डिप्रेसनको शिकार हुने डा. ओझाले बताए । कोराना रोकथामका लागि भएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको समयमा मानिसहरूमा आर्थिक अभाव खड्किएकाले कसरी परिवार पाल्ने भन्नेतर्फ चिन्ता देखिएको छ ।
स्वकीय सचिव र सचिवालयका कर्मचारीको तलब आफैं बुझ्ने...
दशैंको समयमा गहभरी आँसु पार्दै भारत प्रस्थान गर्नेक...
सुरक्षाकर्मीको दशैं : बिहेकै वर्ष पनि मिलेन छुट्टी,...
मुटु जोगाउन त्याग्नुस् यी १० खराब बानी...
यी हुन् कोरोना प्रभावित शीर्ष १० देश (तथ्यांकसहित)
कोरोनाकालमा ३३ देशबाट १ लाख २३ हजार बढी नेपाली फर्किए (तथ्यांकसहित)
अमेरिकामा पुगे ९० लाख कोरोना संक्रमित, भारतको यस्तो छ तथ्यांक
मेसिनबाट यसरी काटिन्छ धान
देशका कुन जिल्लामा कति सक्रिय संक्रमित ? (तथ्यांकसहित)